5 सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन स्थान युरोप मा रमाइलो गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन स्थान युरोप मा रमाइलो गर्न
5 सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन स्थान युरोप मा रमाइलो गर्न
ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्वीडेन, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 16/01/2021)
त्यहाँ केही एकदम नयाँ ठाउँमा पहिलो पटक माछा पकडने जस्तै छ. कुनै पनि Angler लागि, कि इच्छुक वा पूर्ण अनुभव, माछा मार्ने तिनीहरूलाई आराम गर्न मद्दत गर्छ कि अमूल्य गतिविधि छ. के संयोजन पर्यटन र आफ्नो मनपर्ने सोख भन्दा तिनीहरूलाई राम्रो हुन सक्छ?
खुसीको माछा मार्ने आनन्द गर्नेहरूका लागि, छन् युरोप मा ठूलो स्थानहरू सुविधा माछा को एक किसिम. तपाईं हुनुहुन्छ भने तपाईंको अर्को छुट्टी गर्न योजना सबै माछा मार्ने बारे, हामी तपाईंलाई कहाँ जाने निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्छ. गरेको हाम्रो सूची मा एक नजर होस्5रमाइलो गर्न युरोप मा सबै भन्दा राम्रो माछा मार्ने स्थान:
1. माछा मार्ने स्थान स्वीडेन मा
तपाईं स्वीडेन मा माछा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं धेरै अगाडी भन्दा हेर्न पर्दैन स्टकहोम ठूलो माछा मार्ने ठाउँहरूको. उदाहरणका लागि, Stromgatan शहर को बीचमा सही छ, र यो एक ठूलो दृश्य. तपाईं स्वीडिश संसद भवन हेर्न सक्नुहुन्छ र पुरानो टाउन माछा मार्ने गर्दा. अर्को शहरी ठाउँ मा Hammarby ताल को Hammarby Sjostad छ, स्टकहोम मा एक लोकप्रिय छिमेकी. यो ठूलो माछा मार्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् र सजिलै शहर देखि सुलभ छ.
तथापि, तपाईं अझ क्लासिक प्रकृति माछा मार्ने अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं स्टकहोम टाढा ड्राइव हुनेछैन. Ringsjon लेक केही सुन्दर माछा मार्ने ठाउँहरू जहाँ तपाईं व्हाइटफिश र इन्द्रेणी ट्राउट पकड गर्न सक्छन् प्रदान गर्दछ. Drevviken अर्को शान्त ताल स्टकहोम नजिक छ, Ringsjön समान. एक जबरजस्ती र दीगो माछा राख्न ठाउँ, Drevviken लेक तपाईं निराश छैन.
तपाईं पनि स्टकहोम द्वीपसमूह र Galo को द्वीप टाउको सक्छ, जो साँचो पृथक स्वर्ग छ. तपाईं आफ्नो हृदय सामग्री त्यहाँ माछा शिविर र गर्न सक्छन्, को द्वीपसमूह गरेको प्रकृति आनंद.
2. माछा मार्ने स्थान फ्रान्स मा
फ्रान्स एक सुन्दर देश हो कुनै पनि गतिविधि को लागी, त्यसैले यसलाई फ्रान्स कुनै आश्चर्य माछा मार्ने पनि ठूलो छ छ. सबैभन्दा प्रमुख माछा मार्ने स्थानहरु एक ल्याक डु Bourget छ, फ्रान्स गरेको गहिरो र सबै भन्दा ठूलो ताल. यो भन्दा बढी घरहरुमा किनभने यो एक प्रभावशाली स्थानको 30 माछा प्रजाति. उनीहरु मध्ये, ट्राउट, Zander, पाइक, र अड्डा खडा. ताल साँचो Rhône-आल्प्स क्षेत्र को एक jewel छ.
त्यसपछि त्यहाँ मा Bassin d'Arcachon दक्षिण-पश्चिमी छ फ्रान्स को तट - saltwater माछा मार्ने आनन्द गर्नेहरूका लागि. सुन्दर sunrises, क्रिस्टल स्पष्ट पानी, र समुद्री बास केवल केहि चीजहरू जुन तपाईं अर्काचनमा आशा गर्न सक्नुहुन्छ.
विदेश प्रेम देखि Anglers ताल डेर-Chantecoq, सही रक्सी क्षेत्र को दिल मा, गर्न अपेक्षाकृत नजिक पेरिस. यो एक ठूलो छ शुरुआतीहरूको लागि ठाउँ, हुनत पुरानो फाइदा किनभने विशाल आक्षेप को ताल बारम्बार. अन्य उल्लेखनीय फ्रान्सेली स्थानहरू समावेश ला Rance नदी र आयु. ठूलो गन्तव्यहरू लिन दुवै लोकप्रिय छन् आफ्नो परिवार एक माछा मार्ने यात्रा मा.
3. माछा मार्ने स्थान इटाली
जब इटाली, तपाईं साथै युरोप मा सबै भन्दा राम्रो माछा मार्ने ठाउँहरू केही खोज्न सक्छ. Le मार्शे को क्षेत्र केही ठूलो माछा पकडने प्रदान गर्दछ, विशेष गरी Cingoli मा, Pioraco, र Sefro. तिनीहरूले केही हुनुहुन्छ सबैभन्दा सुन्दर इटालियन पोखरी माछा मार्ने लागि, समावेश ट्राउट, पाइक, र आक्षेप, अन्य प्रजाति बीच. तथापि, यो ताल आउँदा, त्यहाँ पनि छ लेक नाइस माथि उत्तर, यसको पाइक र अड्डा संग.
का सबै भन्दा ठूलो इटालियन नदी बारेमा भूल छैन गरौं, को पो. यसलाई कुनै पनि Angler लोभ्याउन भनेर विशाल Catfish र ठूलो carps घरहरुमा. टस्क्यानी मा, नदीहरू सबैभन्दा प्रमुख माछा मार्ने ठाउँ हुन्. लीमा र चलनी ट्राउट र grayling लागि माछा ठूलो ठाउँ हुन्.
ती anglers खुले पानी मा माछा मार्ने रुचि जो लागि, त्यहाँ इटाली दुई ठूलो माछा मार्ने ठाउँ हुन्. को Egadi द्वीप सिसीली र सर्डिनिया को तट दुवै आफ्नो सौन्दर्य र तिनीहरूले प्रदान माछा मार्ने गुणस्तर तपाईंलाई अचेत हुनेछ. भूमध्य मा नीलो-फिन टूना र सिसिली swordfish खोज्न, र अम्बर-ज्याक, स्न्याप्पर, र Tyrrhenian समुद्रमा Garrick.
4. माछा मार्ने स्थानहरु बेलायत मा
को संयुक्त राज्य एक आश्चर्यजनक ठाउँ छ, को द्वीपहरु को unspoiled जंगली सौन्दर्य केही ठूलो माछा मार्ने ठाउँहरू भेटी. तपाईं एउटा अचम्मको क्याच चाहनुहुन्छ भने, बेलायत लागि सही ठाउँ हुन सक्छ. तर जो ठाँउ तपाईं छनोट गर्नुपर्छ?
डार्टमूरमा सब भन्दा प्रख्यात स्थानहरू मध्ये एक, devon. यस्तो evocative नामको, तपाईं गाढा धाराहरु मा भोक माछा लागि माछा मार्ने को अनुभव कल्पना गर्न विफल हुन सक्दैन. नर्थम्बरल्याण्ड मा नदी अपन टाइन तपाईं एक प्रदान एक रंग छ खास फाइदा समुद्र ट्राउट जीवित त्यहाँ विरुद्ध. त्यो दिनको माछा मार्ने लागि यो नदी सिद्ध र सबै भन्दा ठूलो समुद्र ट्राउट क्याच बनाउँछ.
सीमा गर्न नदी Clettwr नजिक इङ्गल्याण्ड र वेल्स adventurers लागि सबैभन्दा आकर्षक ठाउँ हुन जाँदै छ. तपाईं कुनै न कुनै पानी तपाईंको क्याच लागि कडा परिश्रम गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै थप हेर्न. स्थिति केहि छ थप पहुँचयोग्य मा Strangford Lough, काउन्टी तल. यो मैकेरल संग swarming बेलायत सबैभन्दा ठूलो समुद्र loch छ, पोलक, र haddock, अरु मध्ये.
ठूलो अन्तर्गत Nestled - Assynt सबै को सबै भन्दा भयानक ठाउँ हुन सक्छ पहाड, दुवै saltwater र अलवण माछा मार्ने विकल्पहरू. Fionn loch मूल खैरो ट्राउट लागि माछा ठूलो ठाउँ छ.
5. माछा मार्ने स्थान जर्मनी मा
जर्मनी पक्कै पनि युरोप मा सबै भन्दा राम्रो माछा मार्ने ठाउँहरू सूची यसको स्थान योग्य. यति धेरै संग ठूलो नदी र पोखरी, यदि यो सूची बनाउन थिएन यो एक आश्चर्य हुनेछ. जर्मनी मा माछा पकडने लागि सबैभन्दा लोकप्रिय स्थानहरु केही समावेश छ को डेन्यूब क्षेत्र. मा 8 लामो Bavaria डेन्यूब क्षेत्र किलोमिटर, तपाईं माछा को एक विशाल विविधता पकड गर्न सक्छन्.
थप नदी माछा मार्ने लागि, को राइन र Elbe, विशेष गरी बाडेन-Wurttemberg र सक्सोनी-एन्हाल्ट मा प्रेम, क्रमशः, अनुभव अचम्मको छ. तथापि, तपाईं ताल माछा मार्ने रुचि भने, त्यहाँ सधैं छ ताल Chiemsee र पोखरी Starnberg. दुवै एकदम गहिरो छन्, पाइक प्रशस्त साथ, ट्राउट, र ब्रीम.
एक चिलाउनु सबै anglers लागि भ्रमण गर्नु, त्यहाँ आफ्नो दुई ठूलो प्रेम संयोजन गर्न तरिकाहरू छन्. युरोप ठूलो क्याच गर्न ठाउँहरू प्रशस्त प्रदान गर्दछ र प्रकृति आनन्द र हलचल उस्तै शहर.
म्यूनिख Passau गाडिहरु गर्न
नूर्नबर्ग Passau गाडिहरु गर्न
तपाईंले केही ठूलो माछा मार्ने अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, को सजिलै पहुँच प्रशस्त छन्5रमाइलो गर्न युरोप मा सबै भन्दा राम्रो माछा मार्ने ठाउँहरू. तपाईं पानी हिट गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, तपाईंको रेल टिकट बुक अहिले र फिर्ता हेर्न छैन!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 युरोप मा सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन स्थानहरू रमाइलो गर्न” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-fishing-places-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#माछा मार्ने #traveleurope europetravel trainjourney travelgermany traveltips